Dowlada Soomaaliya oo kahadashay sababaha loo xiray weriyeyaasha TV-ga Aljazeera | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Dowlada Soomaaliya oo kahadashay sababaha loo xiray weriyeyaasha TV-ga Aljazeera
Dowlada Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay sababaha loo xiray weriyeyaal ka tirsan telefishinka Aljazeera oo maalintii 3aad ku jira xabsiga ciidanka nabad sugida ee magaalada Muqdisho.
Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) ayaa sheegay in dowlada Somalia aysan ka warqabin qaabka weriyeyaashan ay dalka ku soo galeen iyo jadwalkooda shaqo.
Maareeye ayaa sheegay in weriyeyaasha Al-jazeera markii ay dalka soo galeen ay xiriir la sameeyeen xoogaga Al-shabaab, ayna aadeen degaano fog fog oo kooxdaas ay ka howlgasho halkaasoo lagu soo dhoweeyey.
“Waxaa laga shakisan yahay oo su’aalo laga weydiinayaa qaabka ay dalka u yimaadaan haddii ay wariyeyaal sheegteen iyo haddii kale, sida ay ku heleen xiriirka Madaxda Al-Shabaab ee ay la soo kulmeen iyo iney dowlada ku soo wargeliyeen howlahooda shaqo” ayuu yiri Wasiir Maareeye.
Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) ayaa intaa ku daray in weriyeyaasha Aljazeera ay doonayeen iney dalka ka dhoofaan, iyagoo wata xog hal dhinac ah, iskana qarinaya dhinaca dowladda, wuxuuna xusay in marka baaritaanku dhamaado ka dib la sii deyn doono.
Labo cisho ka hor ayaa ciidamada nabad sugida Soomaaliya waxay xabsiga u taxaabeen weriyeyaal ka tirsan telefishinka Aljazeera oo howlo shaqo u yimid Soomaaliya.